“မရမ်းချောင်းအလှုပြီးစီးခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများများ(၁)" | မိုးဇက်
လူကြီးတွေပြီးတော့ ကလေးတွေကို ကြွေးပါတယ်။မရမ်းချောင်းကျေးရွာက ကလေးတွေ ဂေဟာမှာလာပြီး ဆော့ကစားနေကြဟန်တူရဲ့။
တကယ်တော့ ဒံပေါက်ထမင်းဆိုတာ မရမ်းချောင်းဂေဟာက ဝေဒနာသည်တွေ တစ်နှစ်လုံးနေမှ နှစ်ကြိမ်ပဲ စားခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့။အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ MMYG က သူတို့အတွက် သုံးကြိမ်မြောက် ဒံပေါက်ထမင်းကို လှုဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့မှာ ဒီအလှု ဒီခရီးအတွက် ဒံပေါက်အလှုကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကိုဝေမိုးအောင်+မခင်မာဇင်တို့က သားဖြစ်သူ မောင်ကျော်ဇင်ဟိန်းရဲ့ မွေးနေ့အလှုအဖြစ် လှုဒါန်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မှ Feel Resturant Group မှ မေတ္တာဖြင့် အကောင်းဆုံး ချက်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကိုဝေမိုးအောင် + မခင်မာဇင် နဲ့ သားဖြစ်သူ မောင်ကျော်ဇင်ဟိန်းတို့ ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ပြီး စိတ်နှလုံး ချမ်းမြေ့ကြပါစေ..မုဒိတာ ပွားနိုင်ကြပါစေ.. တကယ်တော့ ကျွန်တော် ဒီနေ့ညမှာ အကုန်လုံးကို တင်ပေးဖို့ပါပဲခင်ဗျား..။ဒါပေမဲ့ မီဂါဝပ်တွေ ပိုလျှံနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ မီးပျက်နေတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ၀ိုင်းတော်သားတွေ ဓါတ်ပုံပို့ပေးဖို့ အခက်တွေ့နေကြလို့ပါခင်ဗျား..။ နောက်လာမဲ့ အပိုင်းမှာ ၀ှီးချဲအလှုရှင်များနဲ့ ပဒေသာပင်အတွက် ထည့်ဝင်ငွေအလှုဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို ဖော်ပြပေးပြီး နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာ အလှုစာရင်း ရှင်းတမ်းကို တစ်ပါတည်း ဖော်ပြပေးပါ့မယ်.. အားလုံးချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျား.. လေးစားစွာဖြင့် MMYG ကိုယ်စား ကိုရင် 15:47(GMT) ~~~~~~~~&&&&&~~~~~~~~ ဆက်ပါအုံးမည် ခင်ဗျား ~~~~~~~~&&&&&~~~~~~~~
This entry was posted in နှိုးဆော်စာ by မိုးဇက်. Bookmark the permalink.
2 thoughts on ““မရမ်းချောင်းအလှုပြီးစီးခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများများ(၁)"”
စံပယ်ချို on7April 2012 at 09:08 said:
မိုးညချမ်း on 21 June 2012 at 22:43 said:
အမြဲတမ်းအပြုံးတွေနဲ့ ကြိုနေတတ်တဲ့ ဂေဟာကအဘိုးအဘွားတွေနဲ့ ရွာထဲက ကလေးတွေကို လွမ်းတယ်ရှင် ...